GAROWE, Puntland - Madaxweynaha la doortay ee Puntland, mudane Saciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta lagu soo dhaweeyay xarunta Madaxtooyadda magaaladda Garowe.
Gaas ayaa Madaxweyne Deni kusoo dhaweeyay qasriga Madaxtooyadda, waxaana ay halkaasi ay ku yeesheen kulan gaar ah, oo ay uga wada hadleen arrimo ku saabsan xil-wareejinta iyo goorta ay dhacayso.
Madaxweyne ku xigeenka cusub Axmed Karaash iyo Camey ayaa sidoo kale ka qeybgalay kulanka, oo noqonaya midkii ugu horeeyay oo ay yeeshaan madaxda xilka ka degaysa iyo kuwa la wareegaya, kadib doorashadii shalay ka dhacday Garowe.
Gaas iyo Camey ayaa kamid ahaa Musharixiinta shalay looga adkaadey doorashadda, iyagoo isku soo sharxay in markale dib loogu doorto hogaanka Puntland, oo shantii sano ee ay xafiiska joogeen lagu eedeeyay wax-qabad la'aan iyo musuq-maasuq.
Madaxweynaha cusub, oo khudbad kooban oo uu shalay jeediyay kadib doorashadii, ayaa sheegay in Taariikhda Puntland u furmay bog cusub, isagoo ugu baaqey shacabka inay gacmaha is-qabsadaan kana shaqeeyaan nabadda iyo horumarka.
Qoraalka ayaa lagu shaaciyay in Madaxweyne ku xigeenka Puntland uusan lahayn...